प्रधानमन्त्री देउवाका दौतरीको यस्तो तयारी, अब के गर्ला कांग्रेसले ? | suryakhabar.com
Home पु.समाचार प्रधानमन्त्री देउवाका दौतरीको यस्तो तयारी, अब के गर्ला कांग्रेसले ?
प्रधानमन्त्री देउवाका दौतरीको यस्तो तयारी, अब के गर्ला कांग्रेसले ?
on: ३० जेष्ठ २०७४, मंगलवार ०६:२५ In: पु.समाचारTags: अब के गर्ला कांग्रेसले ?, अब के गर्ला कांग्रेसले ?, प्रधानमन्त्री देउवाका दौतरीको यस्तो तयारीNo Comments
काठमाण्डौ । प्रधानमन्त्री एवं नेपाली कांग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवासँगै जेल नेल खाएका एक कांग्रेस नेता स्थानीय तहको निर्वाचनमा बागी उम्मेदवार बन्ने भएका छन् । देउवासँगै विगतमा तीन महिना जेल बसेका कांग्रेस नेता सुरेन्द्रबहादुर विष्ट आफूलाई देउवाले गम्भीर धोका दिएको भन्दै कांग्रेसबाट बागी उम्मेदवार बन्न लागेका हुन् ।
मंगलबारको रानधानीमा लेखिएको छ, २०२७ सालमा नेविसंघ स्थापना हुँदा संस्थापक सदस्यसमेत रहेका सुरेन्द्र देउवाका पुराना साथी हुन्। नेपाली कांग्रेसमा आफूले दिएको योगदानबारे देउवालाई राम्रोसँग थाहा भएपनि देउवाले पछिल्ला दिनमा गम्भीर धोका दिएको विश्लेषण गर्दै उनी सुदूरपश्चिमको विकट पहाडी जिल्ला अछामको कमल बजार नगरपालिकाको मेयर पदमा बागी उम्मेदवार बन्न लागेका हुन्।
लामो समयसम्म कांग्रेसमा योगदान पुयाएका सुरेन्द्रलाई अछाम कांग्रेसले कमल बजार नगरपालिकाको मेयरमा सिफारिस गरेको थियो। सिफारिसपछि १४ वैशाखदेखि काठमाडौंमा बस्दै आएका उनले आफ्ना पुराना दौंतरी देउवालाई पनि भेटे। देउवाले पनि उनलाई मेयरको विकल्प अरु कोही नभएको भन्दै ढुक्क हुन भने। तर अन्तिममा कांग्रेसले ओमप्रकाश विष्टलाई मेयरको टिकट दियो। त्यसपछि बिच्किएका हुन् सुरेन्द्र।
काठमाडौंमा सोमबार पत्रकार सम्मेलन गरी सुरेन्द्रले आफूले विगतमा पार्टीलाई पुयाएको योगदान बिर्सेकाले र आश्वासन दिएर पनि झुक्याउने काम गरेकाले उम्मेदवारी दिन लागेको बताए। उनले पार्टीले स्थानीय जनताको भावना पनि बुझ्न नसकेको बताए।
उनी २०४९ सालमा निर्विरोध गाविस अध्यक्ष भएका थिए। २०५४ सालमा भने उनी उठेनन्। अहिले स्थानीय समितिले उनलाई मेयरमा सिफारिस गयो। देउवा आफ्नो पुरानो साथी पनि भएकाले टिकट पाउनेमा उनी निश्चिन्त थिए। देउवाले पनि अर्का विकल्प नभएको भनेपछि उनी झनै हौंसिएका थिए।
पत्रकार सम्मेलनमा उनले देउवाप्रति पनि आक्रोश पोखे। ‘देउवा संकटमा रहेका बेला मैले निःस्वार्थ सहयोग गरेँ, तर देउवाले गुण देखेनन्,’ सुरेन्द्रले भने। उनी २०६२ सालमा अछाम जिल्लाको कांग्रेस पार्टी उपसभापति समेत भएका थिए। हाल उनी महासमिति सदस्य छन्।
Tags: अब के गर्ला कांग्रेसले ?अब के गर्ला कांग्रेसले ?प्रधानमन्त्री देउवाका दौतरीको यस्तो तयारी
२१ अर्ब राज्यको पैसा हिनामिना गरेको प्रमाण फेला परेका भ्रष्टाचारी शर्माका अझै ९९१ फाईल अनुसंधान गर्न बाँकी
यसरी बनाउँछ स्थानीय सरकारले बजेट
३० जेष्ठ २०७४, मंगलवार ०६:२५